China Hydraulic Auto Climbing formwork mveliso kunye nabathengisi | Lianggong
Inkqubo ye-hydraulic auto-climbing formwork (ACS) yinkqubo eqhotyoshelweyo yokuziqabela eludongeni, exhaswa yinkqubo yayo yokunyusa i-hydraulic. Inkqubo yeefomwork (ACS) ibandakanya isilinda esisixhobo esisebenza ngamanzi, isithuthi esingaphezulu nesezantsi, esinokutshintsha amandla okuphakamisa kwibrakethi ephambili okanye kumgaqo kaloliwe onyukayo.
Inkqubo ye-hydraulic auto-climbing formwork (ACS) yinkqubo eqhotyoshelweyo yokuziqabela eludongeni, exhaswa yinkqubo yayo yokunyusa i-hydraulic. Inkqubo yeefomwork (ACS) ibandakanya isilinda esisixhobo esisebenza ngamanzi, isithuthi esingaphezulu nesezantsi, esinokutshintsha amandla okuphakamisa kwibrakethi ephambili okanye kumgaqo kaloliwe onyukayo. Ngamandla enkqubo ye-hydraulic, isibiyeli esiphambili kunye nololiwe onyukayo bayakwazi ukunyuka ngokulandelelana. Ke ngoko, inkqubo ye-hydraulic auto-climbing system (ACS) inyuka ngokuthe chu ngaphandle kwendwe. Akukho sinye isixhobo sokuphakamisa esifunekayo xa usebenzisa i-hydraulic auto-climbing formwork, enezibonelelo zokuba lula ukusebenza, ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo kwinkqubo yokunyuka. I-ACS yinkqubo yenkqubo yokuqala yokhetho yokuqala yokwakha inqaba ephezulu kunye nolwakhiwo lwebhulorho.
I-1Hydraulic auto-climbing formwork inokunyuka njengeseti epheleleyo okanye ngokukodwa. Inkqubo yokunyuka izinzile, iyahambelana kwaye ikhuselekile.
2.Zizibiyeli zenkqubo yokukhwela ezenzekelayo azizukuchithwa kude kube kugqityiwe ixesha lokwakha, ngaloo ndlela kugcinwa indawo yesiza kwaye kuthintelwe umonakalo kwifomwork, ngakumbi kwiqela lenjongo.
3.Ibonelela ngamaqonga onke asebenzayo. Iikontraki azidingi ukuseta amanye amaqonga okusebenza, ngaloo ndlela kugcinwa iindleko kwizinto kunye nabasebenzi, kunye nokuphucula ukhuseleko
4.Impazamo yokwakhiwa kwesakhiwo incinci. Njengoko umsebenzi wolungiso ulula, impazamo yokwakha inokupheliswa phantsi ngomgangatho.
5.Isantya esinyukayo senkqubo yefomwork iyakhawuleza. Ingakhawulezisa wonke umsebenzi wokwakha (umndilili weentsuku ezintlanu kumgangatho omnye).
I-formwork inokukhwela yodwa kwaye umsebenzi wokucoca unokwenziwa e-situ, ukuze ukusetyenziswa kwe-crane yenqaba kuncitshiswe kakhulu.
Iindidi ezimbini hydraulic-forming formworks hydraulic: HCB-100, HCB-120
Umzobo wesakhiwo se-1
Iimpawu eziphambili zomsebenzi
Iqonga eliphezulu ≤0.75KN / m²
Elinye iqonga: 1KN / m²
Ngesanti kubunzulu baphantsi elawulwa ngamanzi
Ukubethwa kwesilinda: 300mm;
Ukuhamba kwesikhululo sempompo yeHydraulic: n ×2L /min, n linani lezihlalo;
Isantya esoluliweyo: malunga ne-300mm / min;
Ilinganisiwe i-thrust: 100KN & 120KN;
Impazamo yokuvumelanisa isilinda kabini: ≤20mm
2.Umzobo wesakhiwo sohlobo lwe-truss
Iqonga eliphezulu ≤4KN / m²
Ngesanti kubunzulu baphantsi elawulwa ngamanzi inkqubo yokuphakamisa
Intshayelelo kwiinkqubo ze-hydraulic auto-climbing formwork
Inkqubo ye-Anchor yinkqubo yokuthwala umthwalo kuyo yonke inkqubo yefomwork. Iqukethe i-bolt tensile, isihlangu se-anchor, ikhowuni yokunyuka, intonga yomtya ophezulu kunye ne-anchor plate. Inkqubo ye-anchor yahlulwe yaziindidi ezimbini: A no-B, ezinokuthi zikhethwe ngokweemfuno.
Inkqubo ye-Anchor A
②CIkhowuni ye-Ming / M42 / 26.5
Ukomelela okuphezulu kwentambo ye-D26.5 / L = 300
④Aipleyiti yenqanawa D26.5
Inkqubo ye-anchor B
②Cikhowuni yelungu M36 / D20
Ukomelela kwamandla entonga ye-D20 / L = 300
④Aipleyiti ye-nchor D20
Ukuthwala umthwalo isibiyeli
Isibiyeli esithwala imithwalo
Umqadi umnqamlezo for isibiyeli ethwele umthwalo
I-brace emacala macala ebrakethi ethwala umthwalo
Umgangatho we-bracket ethwala umthwalo
Indibano esetiweyo ebuyayo
Iseti yentonga yokubuyisela umva
Umqadi weCross weqonga eliphakathi
Umgangatho weqonga eliphakathi
Isihlangu seankile esincamathele eludongeni
Isixhobo esincanyathiselwe eludongeni
Isihlalo esiqhotyoshelwe eludongeni (ngasekhohlo)
Isihlalo esincanyathiselwe eludongeni (ngasekunene)
Indibano yeqonga emisiweyo
Umqadi womnqamlezo weqonga elimisiweyo
Umgangatho weqonga elinqunyanyisiweyo
Icandelo eliphambili lokuhambisa
Umlingisi ophambili 1
Umtsalane ophambili 2
Umqadi iqonga Upper
I-brace edibeneyo yokudibanisa
Isixhobo esikhutshiweyo sokukhwela ikhowuni
Phina ukujija okuphambili
Inkqubo yesixokelelwano samanzi ine-commutator, inkqubo ye-hydraulic kunye nesixhobo sokuhambisa umbane.
Ukuhamba okuphezulu nangaphantsi zizinto ezibalulekileyo zothumelo lwamandla phakathi kwesibiyeli kunye nomzila kaloliwe onyukayo. Ukutshintsha ulwalathiso lwabahambi kungakuqonda ukunyuka okufanelekileyo kwebakethi kunye nokukhwela kaloliwe.
Indibano yeTruss kunye nokufakwa kweqonga lokusebenza
Ingxoxo kunye nokuphakanyiswa kwefomwork
IZiko lezeMali laseShenyang Baoneng
Egqithileyo I-H20 Beam Beam
Okulandelayo: Itonamenti yendlela